kuvunyelwene ngokusongwa kwamacala ngaphambi kolwe-sascoc - Ilanga News
Home Ezemidlalo kuvunyelwene ngokusongwa kwamacala ngaphambi kolwe-sascoc
kuvunyelwene ngokusongwa kwamacala ngaphambi kolwe-sascoc
OMENGAMELI bezinhlangano zezemidlalo eNingizimu Afrika bavumelene ngokuthi kufanele kuphothulwe wonke amacala ngaphambi kokusingathwa komhlangano wokuqoka ubuholi obusha beSouth African Sports Confederation and Olympic Committee (Sascoc).
Laba baholi bebenomhlangano ocingweni (Conference-call) ngoMgqibelo. UThami Mchunu onguMengameli weKwaZulu Natal Sports Confederation, uvumile ukuthi babe nomhlangano nabanye ozakwabo. Uthe namuhla ngoMsombuluko uzosingatha umhlangano ofanayo namalungu esigungu sesifundazwe. Omengameli bazobhala incwadi ezosayinwa yibona bonke bese idluliselwa ebuholini beSascoc.
Kwenzeka lokhu nje, izinto zimapeketwane kwiSascoc njengoba kusanda kumiswa uBarry Hendricks obebanjiswe isikhu-ndla sikamengameli ngemuva ko-kuba uGideon Sam esehlanganise iminyaka engu-70 ubudala.
Umuntu osefike kule minyaka akavumelekile ukuhola le nhla-ngano.
UHendricks umiselwe izinsolo zokugxambukela kwiTennis South Africa (TSA) okuthiwa ubeyinxenxa ukungaliphakamisi igama likaNtambi Ravele (osesithombeni) ukuba angenele isikhundla sokwengamela le nhlangano. Ukumiswa kukaHendricks oyisekela lokuqala likamengameli weSascoc, kuholele ekutheni izintambo zibanjwe okwesikhashana ngu-Aleck Skhosana oyisekela lesibili likamengameli kule nhlangano. Naye uSkhosana uyingxenye yabakhala ngokukhahlelelwa ngaphandle embangweni wesikhundla sokwengamela le nhlangano.
USkhosana noNtambi lolu daba baludlulisele kumlawuli ozimele ngokwahlukana.
OlukaSkhosana bekunqunywe ukuthi luhlalelwe mhla ka-22 kwephezulu, kodwa lokhu kubukeka kungeke kusenzeka njengoba uMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa ekwelulile ukuvalwa thaqa kwezwe ngenxa yokubhebhetheka kwe-coronavirus.
UMchunu uthi ngeke kuwakhe umqondo ukusingatha ukhetho lweSascoc kube kusenamacala alengayo. Uthi bazoqinisekisa ukuthi akekho noyedwa umuntu onesikhalo esingaxazululiwe ngaphambi kokukhetha ubuholi obusha.
UHendricks kuvele ukuthi naye uselujikijele enkantolo udaba lokumiswa kwakhe esikhundleni sokwengamela
Previous articleusanethemba umengameli we-WA
Next articleULifa unxenxa abazali ukweseka izingane zabo